UJONGO EKUKHWELENI EZINZULWINI ZOBUSUKU UPAUL REVERE NGOAPRILI 18-19 - IINDABA
Ujongo ekukhweleni ezinzulwini zobusuku uPaul Revere ngoAprili 18-19
Iinyani kunye neentsomi malunga nokukhwela okudumileyo kukaPaul Revere
Umbongo kaHenry Wadsworth Longfellow Ukukhwela kukaPaul Revere (jonga ngezantsi) isekelwe kwiziganeko zembali, kodwa ingaphezulu kwebali kwaye ayiyongxelo yembali. ULongfellow wabhala lo mbongo emva kokuba ekhenketha eBoston ngo-1860. Wayengumntu othanda ukulwa nokupheliswa kwemfazwe owabhala umbongo wokuzama ukumanyanisa isizwe esahluleleneyo kwimfazwe yamakhaya. Ababhali-mbali baye bawucalula lo mbongo ukususela ngo-1860 baza bawuthelekisa nengxelo ka-Revere yokukhwela ngamazwi akhe kunye nobunye ubungqina bembali.
INkonzo yePaki yeSizwe ibonisa izinto ezininzi ezingachanekanga eziquka oku kulandelayo:
URevere wayesazi indlela yaseBritane ngaphambi kokuba emke eBoston. Nangona izibane ezibini zazibanjelwe phezulu kwiTower yaseMantla eNdala, uRevere wayengalindanga elunxwemeni lwaseCharlestown ukuze azibone. Endaweni yoko, babeyisicwangciso sokubuyela umva xa engakwazi ukuphuma eBoston.
URevere wabanjwa ngooPorola baseBritane eLincoln, emva nje kokudlula eLexington, kwaye akazange afike eConcord. URevere akazange akhwele yedwa ngobo busuku. Kwakukho uWilliam Dawes kunye noGqr. Samuel Prescott. URevere wayengomnye wabakhweli ababini ukuba bemke eBoston (kunye noDawes), kwaye omnye wabathunywa abaninzi abasasaza i-alam.
Ukushiywa kwabanye abakhweli kwaba yinto ebuhlungu kakhulu kwabanye. UHenry Ware Holland, inzala kaWilliam Dawes, wazipapasha imbali ngo-1878 ebizwa ngokuba nguWilliam Dawes kunye nokukhwela kwakhe noPaul Revere. Uthumele ikopi ku-Longfellow, owathi ebhudile wathi yayiyincwadi entle kakhulu…
Imisebenzi kaLongfellow isenokuba ayizange iyithintele iMfazwe Yamakhaya, kodwa emva kokuba imfazwe iphelile kwaye isizwe sasilungiselela ukubhiyozela iminyaka elikhulu, umbongo wawunokubaluleka okuhlaziyiweyo. Umbulelo ngoPaul Revere wakhokelela ekugcinweni kwekhaya losapho lwakhe, elakhiwa ngo-1680, elilelona khaya lidala eBoston.Umfanekiso oqingqiweyo kaRevere wenziwa imodeli ngo-1885 kwaye ukufuphi neBandla eliMdala laseMantla.
Akunakwenzeka ukuba abakhweli bakhwaze, AmaBritane ayeza! Uninzi lwabantu baseMelika abahlala emaphandleni basazijonga njengeBritane. IiRegulars zaziwa njengamajoni aseBritane.
Ukusuka eBoston ukuya kwiConcord
Imishini: Ngorhatya lwe-18 ka-Epreli 1775, uPaul Revere noWilliam Dawes bathunyelwa nguJoseph Warren ukuba baye kulumkisa uSamuel Adams noJohn Hancock eLexington (kunye nabanye abaninzi ecaleni kwendlela) ukuba imikhosi yaseBritane yayisendleleni.
IBoston ukuya eLexington imalunga neekhilomitha ezili-13. ILexington ukuya kwiConcord imalunga ne-6.8 yeemayile.
Emva kokulumkisa uAdams noHancock, badibana noGqr. Samuel Prescott kwaye baqhubela phambili kwi-Concord ukuze balumkise amajoni kunye nokuqinisekisa ukuba iivenkile zomkhosi zichithwa ngokufanelekileyo kwaye zifihliwe kude.
Isiphumo: Ayinabo bonke abakhweli abathathu abaye bafika kwi-Concord kodwa uPrescott wenza, kwaye umkhosi wakwazi ukulungiselela ukudibana neBritane eLexington apho ukudubula kokuqala kweMfazwe yeNguqulelo kwaxoshwa ekuseni ngo-Aprili 19.
Emva komlo eLexington imikhosi yaseBritane yajongana neqela elikhulu leMinutemen eConcord. Amajoni aseMelika ayeka ukuqhubela phambili kwaye anyanzela iBritish ukuba ibuyele eBoston.
I-Bay Area War Civil vet ihlonitshwe iminyaka eyi-126 emva kokufa
IBhunga lihlonipha umntu oye wancedisa ukufakwa kweCupertino
Iklabhu yembali yase-Oakland blues ukufumana ubomi obutsha njengezindlu, indawo yobugcisa
Umlawuli waseTexas uxelele ootitshala ukuba babandakanye iincwadi zeHolocaust ezinezimvo 'ezichasayo'
Berkeley, ukuJonga ngasemva: Iinkokeli ziqala ukulungelelanisa ukuthintela, ukulwa nemililo yasendle
Kwakungeyesibini ngentsimbi yelali, Wathi akufika kwibhulorho ekwidolophu yaseConcord. Weva ukukhala komhlambi, Nokuntyiloza kweentaka phakathi kwemithi, Waza weva impepho yakusasa, Ivuthuza phezu kwamadlelo amdaka. Kwaye omnye wayekhuselekile kwaye elele ebhedini yakhe Ngubani owayeza kuwa kuqala kwibhulorho, Ngubani ngaloo mini wayeya kuba elele efile, Ehlatywe yibhola yaseBritane ye-musket.
Uyazazi ezinye. Kwiincwadi ozifundileyoIndlela amaBhritane adubule abaleka ngayo, -Indlela abalimi ababanika ngayo ibhola yebhola,Ukusukela ngasemva kocingo ngalunye kunye nodonga lwefama,Ukuleqa iidyasi ezibomvu ezantsi kwendlela,Banqumle amasimi ukuze baphinde baveleNgaphantsi kwemithi. ekujikeni kwendlela,Kwaye unqumama kuphela ukuba umlilo kunye nomthwalo.
Ke ubusuku bonke wayekhwele uPaul Revere; Kwaye ke ubusuku bonke isikhalo sakhe sasisiya kuzo zonke iilali neefama zakwaMiddlesex, Isikhalo sokuchasa, hayi uloyiko, Ilizwi ebumnyameni, ukunkqonkqoza emnyango, Ilizwi eliya kuvakala ngonaphakade!Kuba, lithwalwa ngumoya wobusuku bamandulo,Kuyo yonke imbali yethu, kude kube sekupheleni,Ngelixa lobumnyama nobungozi nentswelo,Abantu baya kuvuka baphulaphule ukuva ukubethelwa kwempuphu ekhawulezayo. elahashe, Kwaye umyalezo wasezinzulwini zobusuku kaPaul Revere.
Imithombo: INkonzo yePaki yeSizwe, iSmithsonian, paulreverehouse.org, iAtlantiki, iNational ArchivesImages evela kwiNational Archives kunye neWikimedia Commons